Annaga nagu saabsan - Huizhou Xinsanxing Lighting Co., Ltd.
Soo wac dalab
Iftiinka gaarka ah
Rattan miiska Lamp
Laambada Dabaqa Rattan
Nalalka Bamboo Pendant
Lambaska Dabaqa Bamboo
hadh gaar ah
Iftiinka qorraxda ee dibadda
Shirkadda Iftiinka Xinsanxing waxaa la aasaasay 2007, oo ku taal Huizhou Zhongkai National High-tech Zone.Waxaan hadda ku takhasusnay iftiinka alaabta dabiiciga ah.
Bilowgii aasaaska, waxaan diiradda saarnay horumarinta iyo soosaarka hooska, iyo ballaarinta khadka wax soo saarka ee 2015 si loo soo saaro iftiinka guriga ee gudaha.Later 2019, ka jawaab celinta qaranka "biyaha cagaaran iyo buuraha cagaaran, waa buurta lacagta ah ee dahabka" fikradda ilaalinta deegaanka, waxaan leenahay aragti jihada wax soo saarka, in ay diiradda saaraan wax soo saarka ee alaabta dabiiciga ah, sida bamboo, rattan, alwaax, caws, caws geed, iwm.
Sahminta 3 sano ka dib, warshadeena ayaa soo saartay oo soo saartay noocyo kala duwan oo alaabada iftiinka dabiiciga ah, kuwaas oo loo dhoofiyo Waqooyiga Ameerika, Yurub, Afrika iyo qaar ka mid ah wadamada Aasiya.Ugu dambeyntii, ku guuleystey ammaanta wadajirka ah ee macaamiisha dibadda.In ka badan 10 sano horumarka joogtada ahi waxa uu naga caawiyaa in aanu horumarino tartankeena asaasiga ah.
Xinsanxing waxa ay fahansan tahay muhiimada tayada.Shirkadu waxay ka gudubtay BSCI, ISO9001, Sedex, EU CE iyo shahaadooyin kale.amfori ID:156-025811-000
Hadafka Shirkadda: Riixitaanka baqshadda, oo hogaaminaysa jidka.
Aragtida Shirkadda: U ogolow alaabooyinka tayada ugu wanaagsan inay iftiimiyaan gees kasta oo adduunka ah
Shirkadda Tenet: Tayada waxay ku guulaysataa macaamiisha, daacadnimadu waxay ku guulaysataa suuqa
Qiimaha Muhiimka ah ee Shirkadda
[Dabeecad]: Daacadnimo iyo daacadnimo, is-edbin iyo dadaal
[Mas'uuliyadda]: Dhammaan gacmahayga, wax waa la samayn doonaa;ogaanshaha waqtiga iyo xalinta dhibaatada
[Pragmatic]: Pragmatic, adag oo hufan;kaliya raadi siyaabo, ma cudur daar, ilaa inta soo jeedinta, ha ka caban
[Xamaasad]: Jacayl shaqo, caqabado adag, is-horumarin
[Ka baxsan]: Barashada, wadaaga, hal-abuurka;ka baxsan nafta, ma fiicna, kaliya ka fiican
In design nalalka casriga ah, nalalka ma aha oo kaliya ku siin karaan jawi nalal wanaagsan si ay ula kulmaan dadka shaqada nolosha iyo function jireed, laakiin sidoo kale waxay isticmaali kartaa awoodda muujinta iftiinka si ay u sameeyaan farsamaynta farshaxanka deegaanka gudaha, qurxiyaan deegaanka gudaha, hagaajinaysaa saamaynta booska, dhigay jawiga iyo niyadda, kaas oo aad iyo aad u sii badanaya dareenka dadka.Waxaa naga go'an inaan abuurno habab kala duwan oo alaabta iftiinka ah sida casriga casriga ah, retro American iyo farshaxanka dabiiciga ah si aan u daboolno baahida suuqa ee kala duwan.Alaabadayada waxaa loo dhoofiyaa Yurub, Ameerika, Bariga Dhexe, Koonfur-bari Aasiya, Koonfur Afrika iyo dalal kale iyo gobollada, waxayna ku guuleysteen taageerada iyo xaqiijinta macaamiisha dibadda oo leh noocyo cusub oo kala duwan, qiimo tartan iyo adeegyo aad u fiican.
Xinsanxing waxaa ka go'an cilmi-baarista iyo horumarinta iyo soo saarista heer-sare, agab xirfadeed ee nalka dhaqanka.Shirkaddu waxay leedahay saldhig wax soo saar oo ah 1600 mitir oo laba jibbaaran, oo leh wax soo saar madax-bannaan iyo warshad urursan, in ka badan 100 shaqaale ah, waxay sameeyeen line-soo-saar dhammaystiran oo daboolaya nalalka guriga, nalalka qurxinta gudaha, nalalka qorraxda, nalalka beerta, nalka dibadda, nalalka alaabada dabiiciga ah .
1. OEM / ODM waa la aqbalay, Buuxi shuruudaha gaarka ah ee macaamiisha
2. Nidaamka muunad ee tiro yar waa la aqbali karaa
3. Tayada sare, qiimaha tartanka, gaarsiinta degdega ah, adeegga ugu fiican, xulashada ballaaran
4. Weydiintaada laxiriirta alaabadayada ama qiimayaashayada waxa lagaga jawaabi doonaa 24saac gudahood.
5. Shaqaale si fiican u tababaran oo khibrad leh si ay dhammaan su'aalahaaga uga jawaabaan Ingiriisi faseexa ah
6. Koox ka mid ah xirfadlayaasha farsamada sare iyo dadka maamulka leh in ka badan toban sano oo waayo-aragnimo ah.
7. 100% dhammaan nalalkayaga dhammayska tiran waxaa tijaabin doona ka hor inta aan la dirin shaqaalahayaga QC.
Fadlan noo sheeg fikradahaaga cusub ee iftiiminta qurxinta
Laambadaha farshaxanka dabiiciga ah si ay u hoggaamiyaan iftiinka cagaaran
No.44, Jiazi Warshadaha, Xaafada Chenjiang, Zhongkai Hi-Tech Zone, Huizhou, Guangdong, Shiinaha
© Xuquuqda daabacaadda 20212022: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.